Laba Maxbuus oo – kahor intaanay baxsan -Xabsi ku dhaafay Warqad ku saabsan sababta baxsigooda. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Laba Maxbuus oo – kahor intaanay baxsan -Xabsi ku dhaafay Warqad ku saabsan sababta baxsigooda.
Laba Maxbuus oo – kahor intaanay baxsan -Xabsi ku dhaafay Warqad ku saabsan sababta baxsigooda.
Posted by: Mahad Mohamed July 4, 2020
Himilo – Saxaafadda Talyaaniga ayaa tebinaysa sheekada laba maxbuus oo ku xirnaa jeelka Rebibbia kuwaas oo – kahor inta aanay ka baxsan xabsiga – ku dhaafay warqad ay ku muujinayaan sababta ay u baxsanayaan. Waxay sidoo kale balanqaadeen inay kusoo laaban doonaan laba toddobaad kaddib.
Labada maxbuus oo la kala yiraahdo Davad Zukanovic, 40 iyo Lil Ahmetovic, 46, ayaa halgan adag oo dheer kaddib ku guuleystay inay banaanka uga soo baxaan xabsiga, laakiin sheekada la yaabka leh waxay tahay inay sabab u yeeleen baxsashadooda.
Labada nin oo walaalo ah waxay sheegeen inay soo xaliyaan xaalad ka dhex jirta qoyskooda, balse ay ku soo laaban doonaana xabsiga durba marka ay kasoo dhammaadaan xalinta mushkiladdii ku qaaday inay baxsadaan.
Muddo 15 cisho ah ayay qabsadeen inay kusoo laabtaan gudaha xabsiga, balse macadda haddii ay fulin doonaan balanka ay qaadeen iyo in kale.
Previous: Chelsea oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro Pau Torres
Next: Everton oo Arsenal kula tartameysa John Stones
Muslimiinta Ireland oo kaalmeynaya Darbi-jiifta dalkaas
Xiddigta miisaanka culus ee Latvia oo qaadatay diinta Islaamka
La kulan: Ninka aaminsan in uu ugu shidan yahay Afrika
Sawirro — Sababta guri labadiisa dhinac loo mariyay buundo
Dhibaatada iyo halista xilliyada roobka ka curto geyigeenna
Xaafaddo guryaha aysan laheyn albaabo!!
Macluumaadka ay tahay in aad ka ogaato Jabaan
Maxay ka simman yihiin dadka iyo xayaawannada naasleyda?
Baaritaan: Inta badan dadka Ruushka ma oggola in haweenka qabtaan xilal sarre
Seynisyahanno shaaciyay sababta dad badan u jecel yihiin qaxwada
Liverpool oo aan ka quusan xiisaha Ismaila Sarr
50 jir labo jeer ku guuleystay bakhtiyaa nasiib ku kacaya $4,000,000
Shaqadiisa ayuu waayay sabab la xiriirta COVID19 balse waxa uu noqday Milyaneer
Haweenay maalinta dhalashadeeda ku guuleysatay bakhtiyaa nasiib $1 Milyan